10 Doro Zvinwiwa Kuedza Pasi Pose | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Doro Zvinwiwa Kuedza Pasi Pose
Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Rovedza Kufamba Spain, Rovedza Kufamba Matipi, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Chakavanzika mapepa, kuravira kwepfungwa, uye anodhakwa zvikuru, zvepanyika mabhawa akanakisa uye makirabhu anoshandira izvi 10 unofanira-edza zvinwiwa zvinodhaka. Kubva kuChina kuenda kuEurope, vamwe 10 zvinwiwa zvinodhaka kuyedza pasirese zvine mazana mashoma emakore. Kunyange zvakadaro, ivo vanozivikanwa kwazvo, nekubata chinwiwa kana 2, pazororo rako chiitiko chisingafanirwe kushaikwa.
1. Doro Zvinwiwa Kuedza Pasi Pose: Aperol Spritz Itari
Waini-based cocktail, Aperol Spritz inonaka uye zvigadzirwa zvaro zvichaita chete muyakaenzana huwandu hwakaringana pasati makosi makuru asvika. Spritz ndeyekare yakakurumbira aperitif kuNorth Italy, yakatanga kutanga muVenice. Iyo spritz musanganiswa weCampari, prosecco, uye soda mvura, pachando, saka yakanakira kupora kumusoro guta rako rinozorora zororo.
Iwe ungangodaro uchiona iyo yeorenji-yakatsvuka-ine chinwiwa chinwiwa mune yakakwira magirazi ewaini, pamusoro peanenge ese tafura yekudyira muItari. Aperol spritz inozorodza uye yakakwana kune yeMediterranean inopisa mazuva echando, saka iwe unofanira kungoedza ichi chinwiwa chinwiwa kana uchidya muItaly.
Mushure mekurambidzwa kwe 100 makore muFrance, iyo Green Fairy iri kuwana mukurumbira kumashure. Ichi chinodhakwa chinwiwa chinwiwa chaive chinodiwa pakati pevanyori veParis uye maartist mu 19-20fung zana remakore, kunyanya muMontmartre. Absinthe ndeimwe yeiyo 10 Doro rakanyanya kunwa doro kuyedza pasirese.
nhasi, unogona kuva nepfuti ye absinthe, asi pfuti chete sezvo ichi chinwiwa chakasimba kwazvo, mumabhawa mazhinji muParis. La Fee Verte, Lulu Muchena, L'Absinthe Cafe, ndidzo dzimwe dzenzvimbo dzakanakisa kwaunogona kuyedza doro rinodhakwa pasirese. zvisinei, izvo zvekutanga zvigadzirwa iwe zvaucharavira mune ese mafomu e absinthe ndeye anise, unovava maruva, uye fennel inotapira.
Iwe pamwe hauna kuziva kuti "Sangria" inotangira pashoko "Sangre", ropa, muchiSpanish. Hapana chekufunganya pamusoro peichi chinwiwa chinwiwa zvinongedzo, iri rakakosha zita rinongoreva kune rakatsvuka dzvuku. Iko hakuna chinhu chiri nani kupfuura mukombe weSangria masikati ane dhishi rePaella.
MaRoma ndivo vekutanga kugadzira Sangria kubva kumazambiringa muMiddle Ages. Chinwiwa chemazambiringa chakazove chakakurumbira chinwiwa chinwiwa mushure mekumwe doro kudzivisa hutachiona kure. Iyo yechinyakare sangria yakaitwa kubva kuTempranillo mazambiringa, yakakura mudunhu reRioja, Speini. zvisinei, unogona kuyedza ichi chinwiwa chinwiwa chinwiwa kwese muSpain nePortugal.
Nzvimbo shoma dzakakurudzirwa ine yakanakisa Sangria muBarcelona: cava uye tsvuku Sangria muArcano, manwiwa neSangria mumaThikiti.
Iyo gin yakatanga kusvika kuBritain kubva kuHolland muzana ramakore rechi18. Icho chikonzero ndechekuti Gin inogadzirwa kubva kumabriji emusango, saka Gin chibereko-chakavakirwa chinwiwa chakasanganiswa nesoda, mvura, uye dzimwe nguva zvinotapira. Iyo gin ndiyo yaive chinwiwa chekutanga chakaunza vakadzi nevarume pamwe chete mumapabhu muEngland. Icho chikonzero ndeye yakakwira mwero yedoro, kuita kuti zvese zvidziviriro zvinyangarika.
nhasi, Gin inosanganiswa nemhando dzakasiyana siyana: mint, akachekwa ndimu zvimedu, peppercorns, uye ine muto mutsvuku-orenji. Sezvo Gin iri doro zvakanyanya, uchadhakwa kwazvo kupfuura kumhanya kwechiedza. saka, zvinogara zvichikurudzirwa kuenda kumabhawa muboka. Nenzira iyi iwe wakachengeteka kubva kune imwe hukuru hwekufamba hutsotsi hwekudzivirira pasirese, kunge yemunharaunda ine hushamwari.
Iyo inoratidzira doro reCzech Republic idoro. Doro rakachipa kupfuura mvura muCzechia, uye havazi vazhinji vanoziva kuti inofanirwa-edza chinwiwa chinwiwa Becherovska. Izvo ndizvo, iyo inodhakwa zvakanyanya Becherovska chinwiwa chinonyanya kufarirwa munguva yechando. Ichi chinwiwa chine zvinopfuura 20 mhando dzemishonga, Sinamoni yakavhenekerwa, yakavhenganiswa nepeya kana chinanazi muto. Izvi zvinokonzerwa nehutano hwakasimba hwemishonga, uyezve iyo 38% doro.
Nzvimbo yakanakisa yekuyedza Becherovska iri muBecher's Bar. Iri rinotonhorera bhawa rakatumidzwa zita raJosef Vitus Becher, uyo akashandura doro kubva kumushonga wekugaya, muchidhakwa chinovava zvazviri nhasi, dzokera mukati 1807.
6. Mukombe wePimm weUnited Kingdom
Kupinda Wimbledon kana Chelsea yegore ruva Ratidza pazororo rako reChirungu? Iwe unogona kunge uchanwa zvinopfuura 1 mukombe wePimm. Pimms ndiyo yekupedzisira chirimo chinonwa muzviitiko zveEngland zvezhizha, zvinotapira, iced, uye yakashanda nemichero, yakakwana kumazuva anopisa ezhizha.
zvisinei, usakanganise ichi chinwiwa chemuchero kuti chingori chibhakera chakanaka, nekuti zvirimo zvine 25% doro. Pamusoro pe, Pimms iri gin-yakavakirwa iyo inowedzera kune ayo doro mazinga, saka ungatotadza kucherechedza kuti sei 1-2 zvinonwiwa zvinokutora iwe kupfuura kungwara pane iyo chikuru zhizha zviitiko zveBritish.
7. Doro Doro Kunwa Kuedza Pasi Pose MuChando: Gluhwein
Nguva yeKisimusi ndiyo imwe yenguva dzakanakisa dzekufamba muEurope, uye Christmas misika ndiko kukwezva kunoshamisa kwazvo. Gluhwein iwa mulled inoshamisa, uye iwe unogona kuiravira mumisika yeKisimusi kuGerman, Ositiriya, uye Switzerland, ingo tevera vanhu vanofara.
Kusiyana newaini tsvuku, Gluhwein inotapira, yakasanganiswa nemuchero, zvinonhuwira, uye sinamoni. Pamusoro pe, iwe uchaitenga ichidziya, saka ichakupa zororo rinotapira uye rinonyaradza kubva pakufamba-famba uchitonhora muEuropean yechando. Kupesana nezvinwiwa zvinotonhora-zvemamiriro ekunze, Schnaps ndiyo imwe nzira yakanaka kune yakasvinwa zvinwiwa zvinodhaka kuyedza kana muEurope.
8. Doro Doro Kuedza MuChina: Maotai Doro
Iyo yenyika yeChinese Maotai doro rinogadzirwa mudunhu reGuizhou. Maotai akatanga kugadzirwa panguva yeMing dynasty muzana ramakore rechi 16. Izvi zvinofanirwa-kuedza doro rinodhaka reChinese zviyo zvakagadzirwa nenzira inotora makore mashoma kusvika musanganiswa uyu kuitira kuti doro rigone kufema zvakanaka.
saka, kana uri kufamba muChina, saka zvirokwazvo edza iyi yakasarudzika Maotami chinwiwa. Izvo zvakanaka kuiravira pa 20-25 tembiricha tembiricha, mugirazi yakasarudzika-yakaita girazi. Izvi zvinokutendera iwe kuravira zvakapfuma uye zvakakosheswa zvinonhuwira zveiyi soy muto-yakasanganiswa Chinese chinwiwa.
9. Kubata Italy
Unogona kuravira iyi inonaka pomace – Mazambiringa brandy inozivikanwa muNorthern Italy, Siwizarendi, uye San Marino. Paunenge uchinwa Aperol masikati, iyo grappa inwiwa mushure mekudya kwemanheru, kubatsira kugaya iyo inorema pasita kana pizza chikafu. saka, kusiyana neyakajairika waini iwe uchanwa mune yakakwira waini magirazi, iyo grappa ichauya mumagirazi madiki e 1-2 ounces.
Pamusoro pe, unogona kuedza Grappa pamwe ne espresso ipfupi, kana kutomboiravira yakasanganiswa mumabiko, kana nzira, iwe uchanakidzwa nekuedza ichi chinwiwa chinwiwa chinwiwa cheItaly, uye unofanirwa kuinamira pasi kune zvaunofanirwa-edza zvekudya uye zvinwiwa muItari.
10. Jenever Belgium
Doro dzekare muEurope, Jenever ndiko kwakatangira Gin. zvisinei, nhasi izvi zviviri zvinwiwa zvidimbu zviviri zvakasiyana chaizvo zvinwiwa zvinodhaka. Paunenge uri muBelgium iwe waigona kuyedza iyo yekare uye yechidiki Genever, iye wechidiki Gen seanoshambadza, nepo yekare Gen mushure mekudya kwemanheru sekugaya.
Iyo Jenever ndiyo mweya weBelgium kune zvinopfuura 500 makore. Vazhinji vanoenda kuBelgium nechinangwa chekuravira rakanakira doro reBelgium. Kunyange zvakadaro, Jenever ndiyo yechinyakare chinwiwa chinwiwa muBelgium. Kana iwe uchida kusundira Belgian Jenever seyeuchidzo, tsvaga bhodhoro rakagadzirwa nevhu, iwo ma iconic akagadzirwa nemajugs anochengeta ichi chinwiwa chinwiwa.
Antwerp kuBrussels Ine Chitima
Amsterdam kuBrussels Ine Chitima
Paris kuenda kuBrussels Ine Chitima
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga yako zororo kutenderera pasirese. Mabhawa akanakisa, Pubs, uye nzvimbo dzekuyedza idzi 10 zvidhakwa pasi rese rwendo rwechitima kure.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Doro Zvinwiwa Kuti Uedze Pasi Pose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / ru ku / fr kana / es uye mimwe mitauro.
#zvinwiwa Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks
Travel Tips For Exploring Italy By Train